LG Ultrafine 5k ichave ichiwanikwa kutakura kubva munaKurume 9 | Ndinobva mac
Chibvumirano chebhizimusi chakasvikwa neApple neLG kuti vabatanidze pamwe gadziriro ine 5k resolution kutsiva iyo Thunderbolt Display iyo kambani yeCompertino yakabviswa mumusika pakutanga kwegore, yakapa Apple mamwe matambudziko kupfuura zvaaigona. Kutanga zuva rekumisikidzwa zviri pamutemo raifanirwa kunonoka mwedzi yakati wandei nekuda, sezviri pachena, kumatambudziko nekugadzirwa kwemuenzaniso ne5k resolution uye yanga isingawanikwe kutakura kusvika pakati paDecember. Nguva pfupi yapfuura kuvhurwa kwayo, vashandisi vazhinji vakashuma vachisangana nematambudziko ekupindirana kana iyo Wi-Fi router kana modem yaive padyo nayo.
Sezviri pachena uye mushure mekuferefetwa kwemushandisi, LG yakasimbisa zviri pamutemo kuti dambudziko iri raive nekuda kwekuti chishandiso hachina kupfeka kwakakodzera, uye chinosungirwa mumhando iyi yemidziyo, kudzivirira masaini emagetsi kusakanganisa chiratidzo. Kamwe payakange yaziva dambudziko, LG yakasiya kubva mukutengesa ese mamodheru ane 5k resolution pamusika, ichidaidza vese vashandisi vaive nezvinetso neiyi modhi, kuti vaende nayo kune technical service kuitira kuti vagone kuitsiva neimwe kana kuwedzera iko kupfeka. zvakafanira.
Mushure mekuona dambudziko iri, LG yakamisa kugadzirwa kwemuenzaniso uye ndokurangarira ese mamodheru aive akamirira kutumirwa kune vatengi. Kwapera mwedzi, iyo kambani yeKorea yatove neiyo nyowani stock yakagadzirira kutanga kutumira chishandiso kune vatengi vakachichengeta uye kutsiva mamodheru ayo vatengi vakatumira kune technical technical service. Zuva idzva rinotarisirwa rekutakura ndiKurume 9, uye ini ndinoti zuva rinotarisirwa, nekuti zuva iri rinogona kumuka kunonoka, chimwe chinhu icho zvinosuruvarisa kuti Apple isu tajaira munguva dzichangopfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » LG Ultrafine 5k ichave ichiwanikwa kutakura kubva munaKurume 9